Shina LITTLE GIRL LIGHTSTICK orinasa sy mpanamboatra | Lake Lake
MAZAVA FITIAVANA GIRL KELY
Ahoana no fiasan'ny hazavan'ny jono?
Ny hazavan'ny Fishing Glow Sticks dia mampiasa fihetsika simika hamoahana hazavana. Vantany vao vaky ny kapsily anatiny amin'ny alàlan'ny fanondrahana ilay hazo, dia mitranga ny fihenan'ny simika ary manomboka mamirapiratra ilay hazavan'ny jono.
Maninona ny hazavan'ny jono no manampy trondro bebe kokoa?
Mampamirapiratra ny jono hisarihana trondro bebe kokoa
Mahatonga ny maunu ho lehibe kokoa
Mampihetsi-po amin'ny fomba mandaitra ny trondro tsy miandany na manimba
Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny fanjonoana amin'ny alina dia ny fahitana ireo toro-hevitra amin'ny tsorakazo. Ny olona sasany dia tia mampiasa lakolosy hampandrenesana ny kaikitry ny trondro. Na izany aza, ny lakolosy dia mety hanahirana rehefa entina na mihodina amin'ny trondro. Hazo mamirapiratra azo ampiasaina hanoloana lakolosy hanaraha-maso tsy tapaka torohevitra momba ny tsorakazo.
Ahoana no ifandraisan'ny tehina jono manjono amin'ny tsipika na ny fihantonany moka?
Ampiasao ny tanany plastika miaraka amin'ny tsorakazo amin'ny fametahana ny farango na tsipika voatonona. Asio kofehy manify ny tanany, avy eo atsofohy ao anaty tanany ilay hazavam-pahazavana, ary tery ny tady manify, afatory amin'ny tadiny na farango ilay tady. Ny sasany amin'ireo mpanjifanay koa dia mampiasa kasety elektrika hametahana azy.
Mandra-pahoviana no hamirapiratra izy ireo?
Farafaharatsiny 20 ora.
Tsy misy poizina ve izy ireo? Ary inona ny loko azo alaina?
Eny tsy misy poizina izy ireo. Available amin'ny Green.
Vidin'ny FOB: US $ 0.35 ~ 0.75 / pcs
Fonosana: Fonosana OEM
Fanamboarana: Logo namboarina, fonosana
Fahaizana manome: Boaty 10000 isan-kerinandro
Ny fonosana ataontsika: 2pcs / kitapo, 50bag / boaty anatiny, 100 pcs total
Orinasa hafa eo amin'ny famonosana lampihazo: 5pcs / kitapo, 10bag / boaty anatiny, 50 pcs total
Ny vidin'ny orinasa misy antsika no ambany indrindra. Tsy orinasa mpivarotra izahay,
Izahay dia manome ny tombotsoan'ny olona afovoany mivantana amin'ny mpanjifanay.
Any Chine, izahay no mpanamboatra voalohany indrindra manamboatra zana-kazo manjono.
Amin'ny alàlan'ny teknolojia famolavolana antoka miantoka ny indostrialy tanteraka, ny vokatray dia afaka miaina eo amin'ny tsena mandritra ny 20 taona mahery.
Ny vokatray dia ny 3/5 amin'ny tsena manerantany.
Ny vokatra marobe eny an-tsena dia maka tahaka antsika, ary ny sasany aza vita amin'ny famolavolana ny vokatra voalohany. Ny fe-potoana luminescence an'ny vokatra voalohany dia latsaky ny ampahadimin'ny vokatra misy ankehitriny
Manantena ny hiara-miasa aminao！
Fonosana : 2 pcs / fonosana, 50packs / boaty, na arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa.
FANOMEZANA: TT / Paypal / Antoka ara-barotra sns
Fomba fandefasana: Amin'ny ranomasina na amin'ny alàlan'ny rivotra amin'ny alàlan'ny UPS / DHL / TNT / FEDEX sns
Teo aloha: JAPANESE DIAMOND LIGHTSTICK
Manaraka: MAZAVA MAZAVA
2. Azontsika atao ve ny manonta ny logo / tranokalantsika / anaran'ny orinasa amin'ny vokatra?
Kitapo hazavan'ny jiro manjono
mpanamboatra jiro hazo manjono
Hazo fanjonoana jiro
tehina manjelanjelatra manjono
mamirapiratra amin'ny jono maizina manjono
hazo mamirapiratra hanjonoana
Factory Direct φ2.9 φ4.5 Jiro klasika
Factory Direct φ4.0 Jiro klasika
FOLO PCS Isaky ny kitapo
Long Luminous Time Mini Night Float Clip Fishin ...
Factory mivantana φ3.0 φ3.5 φ4.5 pcs dimy isaky ny kitapo
5 pcs / kitapo 10 ora mamirapiratra sticks manjono mitsingevana Lig ...